Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, niaraka tamin'ny fitomboana haingana ny toekarem-pirenena, ny indostrian'ny angovo dia nivoatra haingana, izay nampiroborobo ny fampandrosoana haingana ny indostrian'ny tilikambo mpampita. Araka ny antontan'isa, ny fidiram-bolan'ny indostrian'ny tilikambo fampitana any Chine dia nitombo hatramin'ny 5 miliara yuan tamin'ny 2003 lasa 42.6 miliara yuan tamin'ny 2010, miaraka amin'ny CAGR 36,68%, ary ny indostria dia ao anatin'ny vanim-potoana fampandrosoana haingana. Tamin'ny 2010, ny indostrian'ny tilikambo fampitana sinoa dia manana fironana fampandrosoana tsara, ary ny orinasa ao amin'ity orinasa ity dia manana fitantanana ambony sy fahaizana mifehy ny vidiny sy ny vidiny ary manana tombom-barotra matanjaka.
Tamin'ny faran'ny taona 2010, ny orinasam-pifamoivoizana miisa 252 izay mihoatra ny refy ao Shina dia nahatratra 32,250 miliara yuan, fitomboana 25,55% isan-taona. Tamin'ny 2010, ny sandan'ny vokatra indostrian'ny indostrian'ny tilikambo vy any Sina dia 43.310 miliara yuan, fitomboan'ny 25,36% isan-taona; ny vola miditra amin'ny varotra dia 42,291 miliara yuan, fiakarana 29,06% isan-taona; ny totalin'ny tombony dia nahatratra 2.045 miliara yuan, fitomboana 43,09% isan-taona.
Mandritra ny vanim-potoanan'ny drafitra dimy taona faha-12, hampitombo ny fampiasam-bola amin'ny sehatry ny herinaratra i Shina, miaraka amin'ny fampiasam-bola manodidina ny 2,55 tapitrisa lavitrisa yuan, mitaky 48% amin'ny totalin'ny fampiasam-bola, izay 3,0% avo kokoa noho izany amin'ny dimy taona faha-11 Vanim-potoana drafitra. Miaraka amin'ny fitomboan'ny fampiasam-bola amin'ny sehatry ny herinaratra, hitombo tsy tapaka ihany koa ny fangatahana tilikambo fampitana, ary malalaka ny vinan'ny indostrian'ny tilikambo fampitana. Ny tahan'ny fitomboana isan-taona amin'ny fidiram-bolan'ny indostrian'ny tilikambo fampitana sinoa dia 28% hatramin'ny 2011 ka hatramin'ny 2012, ary antenaina fa ny vola azo amin'ny varotra an'ny indostrian'ny tilikambo fampitana sinoa dia hahatratra RMB 70,3 miliara.
Tilikambo vy misy zoro herinaratra Ny tsangambato vy dia zoro lovia miaraka amin'ny fidinana ambany. Ny faritra miboiboika dia vita amin'ny vy zoro mifanila amin'ny tsirairay, ary ny lamin'ny fandaminana ny vy zoro dia mifanitsy amin'ny làlan'ny fikorianan'ny rano. Ny sisin'ny maranin'ny vy zoro dia eo amin'ny faritra ambany, ary ny fizarana hazo fijaliana dia miendrika "V". Misy elanelana misy eo anelanelan'ny vy vy roa mifanakaiky aminy. Ilay midina dia mitovy amin'ny lovia mahazatra. Ny ranoka i ...
Tilikambo famindrana angovo vy, Rafitra vy amin'ny Tube, Tilikambo vy amin'ny angovo elektrika, Tilikambo vy anggoro elektrika, Firafitra Steel Prefab, Tilikambon'ny Serasera Kaonty,